उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन दिनदिनै जटिल बन्दै गएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै सवारी साधनको सङ्ख्या पनि अत्यधिक रुपमा बढेर गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे हाल काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ११ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन रहेको बताए । उनले भने – “वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन भित्रिन्छन् ।”
उनले भने – “सहरी विकासको अनुपातमा सडक विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुका साथै यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।” घिमिरे काठमाडौँमा सवारी साधनको चापअनुसार ट्राफिक खटाउने हो भने दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताए । अहिले एक हजार ८५ जनाको दरबन्दी महाशाखामा भए पनि देशभरबाट तालिममा आएका ट्राफिकलाई समेत काममा खटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, सवारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन उच्च अनुशासित भएर गर्ने, समयानुकूल ट्राफिक सङ्गठन परिवर्तन गर्दै लैजानु, ट्राफिक व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउने मूल्य र मान्यताअनुसार काम गरिरहेको महाशाखाका प्रमुख एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङ्मार लामा बताए ।
बोक्सीको आरोपमा बुहारीलाई मार्न खोजे जेठाजुले, सिमामा भारतीय प्रहरीको अर्काे ज्यादती !
‘कांग्रेसलाई ग्रहदशा लागेको छ, निर्वाचनपछि पछुताउछ'-उपेन्द्र यादव
एमालेले टिकट नदिएपछि दीपक मनाङे बने बागी उम्मेदवार !
जापानमा आमनिर्वाचनको मतदान
बंगलादेशमा पुगे झण्डै छ लाख रोहिङ्गा, बालबालिका रोगको शिकार: राष्ट्रसंघ
फोरम सहमहामन्त्री आलम एमाले प्रवेश